Arrimo Aynu Badankeenu Samayno Balse Laga Qaado Cudurro Halis Ah Oo Uu Ka Mid Yahay Cancer - Daryeel Magazine
Arrimo Aynu Badankeenu Samayno Balse Laga Qaado Cudurro Halis Ah Oo Uu Ka Mid Yahay Cancer
fariintani aad ayay muhiim u tahay fadlan la wadaag dadka aad jeceshahay.
Talooyin Caafimaad Oo Muhiim Ah:
Mobile-kaaga marka aad qabanaysid fadlan saar dhagta bidix.
Dawada marka aad liqaysid ha ku cabin biyo qabaw..
Ha cunin cunno culus 5-ta galabnimo kadib (after 5pm).
Biyo badan cab subaxii, habeenkiina yarayso.
Waqtiga ugu fiican ee hurdadu waa inta u dhaxayso 10-ka habeenimo ilaa 4-ta subaxnimo (10pm to 4 am).
Ha is tuurin oo ha jiibsan isla marka aad sidaa wax cunto-ba.
Marka baytariga mobile-ku uu ilig kaliyaati ku hadhsan yahay amaba uu battery low sheegayo, Ha qaban taleefanka, waayi radiation-ka uu leeyahay waxa uu 1000 jeer ka khatar san yahay marka kale.
Ma la wadaagi kartaa fariintan dadka aad jeceshahay? daryeelmagazine.com waan tan ay kuusoo gudbisaye,
Xarunta kiimikal baadhista ee (U.S.A. CHEMICAL Research Center) ayaa waxa ay soo saartay natiijadan cusub: Shaaha ha ku cabin koob caag ah (Plastic Cups), cunnadana haku cunin backa lagu soo moolgareeyo ee one time-ka layidhaa (Polythene Paper), caagu waxa uu la falgalaa caaga waxa aanuu sababa 52 nooc oo xanuunka Kansar-ka kamid ah The plastic reacts to heat n It Will Cause 52 Types of Cancers. Sidaa daraadeed, fariintan fiican ee caafimaad waxa ay u dhigantaa in kabadan 100 fariimood oo bilaa faaido ah, Fadlan la wadaag cidkaste ood noloshooda dan ka leedahay, oo aad jeceshahay, daryeelmagazine.com inteedii way qabataye oo wa taas kuu soo gudbisay, fadlan share garee.
Wax aad khasaaraysaa ma jirto haba yaraate balse Cilmigu waa POWER
Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka